Semalt: Chii Chinonzi Darodar.com Kutumira?
Kana uchitarisa kero yako yeGoogle Analytics nguva dzose, unogona kucherechedza zvimwe zvekutsvaga mumakero ekutsvaga. Pakuona, izvozvi zvinotarisa zvisina mhosva kusvikira iwe uchitarisisa zvakanaka chii chiri kuitika ne data yako analytics. Mawe webmasters akasiyana-siyana nevablogiki vanocherechedza huwandu hwemotokari inouya kumawebsite avo kubva kuDarodar.com. Semalt nyanzvi, Julia Vashneva, anonyevera kuti nzira dzenhema hadzina kuiswa kune darodar.com, inobva pamatoni ezvimwe zvinotumirwa uye hukama hwavo hwakabatana sehuwandu hwewebhu website, kambasoft, 7makemoneyonline, nezvimwe - entrega correios consulta. Aya maweta anomutsa mutsvuku mutsvuku kune webmasters, mabhizimisi, uye vatengesi, uye inguva yekuziva kuti darodar.com ndeyi uye kuti sei kutumirwa kwebasa spam kushanda.
Muna 2013, vamwe webmasters vakacherechedza kushanyira kunoshamisa kubva kune imwe nzvimbo inonzi darodar.com uye yakasiyana-siyana. Vanhu vakaona kuti nzvimbo dzavo dzekutsvaga dzichigamuchira 200 kusvika ku2000 kushanyira pamwedzi kubva kune mawebsite asinganzwisisiki uye anonyunyuta, uye kubhadhara kwaive ne100% izvo zvinoreva kuti vashanyi havana kushandisa zvishoma kune yechipiri panzvimbo dzavo. Nenguva isipi vadzidzisi venzvimbo uye webmasters vanogumburwa pane darodar sevakakurumbira kutumira spam network.
Zvakachengeteka kutaura kuti darodar.com inozvitengesa seyoyo yakanakisisa SEO kambani inobatsira kuvandudza kushandiswa kwewebsite yako. Kutaura zvazviri, kambani ino inosvibisa account yako yeGoogle Analytics nechitsauko chakakosha uye dambudziko guru nderokuti hazvibviri kubvisa kutumira kwayo spam. Nyanzvi dzeWebhu dzinoti darodar yadzosa tsvina yeSeo tactics kudzokera kushanda. Iko kambani yakabuda se spam ekudzosera giant uye iyo inonzi "webmaster tools" inowanikwa mawebsite madiki uye makuru eine vashanyi vakaderera. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti site ino hainetseki kuunza magwagwa chaiwo uye zvinangwa zviduku kusvika kumashamba mabhiriji kuti zvivandudze huwandu hwayo.
Kana ukashamisika kuti darodar.com inoshanda sei, regai ndikutaurire kuti bots and spiders ayo anotumira matanho ekukumbira kuti webhusaiti yako iwanike nyore kugona. access file, kuumba HTML referrer links uye zvino kuratidza sekutumira kushanyira mubhuku rako reGoogle Analytics.Iye inofanirwawo kuti darodar.com inotumira dzakawanda dzevashanyi vashanyi kune nzvimbo uye mazano eGoogle Analytics data.Dambudziko guru nderokuti bots rambai makarobho.txt murairo uchikumbira kuti varege kunyora.Robots.txt mafaira anoshandiswa zvakanyanya kuderedza mazita bots chaikunyora webhusaiti yako uye kuunganidza ruzivo.Vanhu vakawanda vekutsvaga webhu vanowana mavhariji ewebsite yako zuva nezuva.Google nezvimwe injini yekutsvaga s inoshandisawo vakwegura kuti vanyore nzvimbo yako, uye ndizvo zvinoreva darodar.com.
Iwe haufaniri kumhanyira darodar.com kana chero imwe nzvimbo yakabatana kana iwe uchida kuvimbisa kuchengeteka kwako paIndaneti. Uyewo, haufaniri kushandisa mapaundi ayo uye usaedza kubvisa darodar.com kubva kwauri kutsvaga injini mhinduro . Zvimwe zvakanyanyisa, iwe unofanira kubvisa cache kuti uone kuti darodar.com nevakashamwaridzana navo havasati varipo munhoroondo yako. Kuti ubvise kuburitswa uku spam, unofanira kuidya kubva paGoogle Analytics account. Kunyangwe zvisingambogadziri mabhoti kubva pakuzarura nzvimbo yako, iyo ichabvisa zvinyorwa zvakanyengedzwa zvakakomberedza darodar.com uye zvinyorwa-zve-website. Iwe unogonawo kudzivirira darodar.com kubva ku .htaccess file, uye izvi zvinogona kuitwa nekuisa kadhi yepamusoro pamusoro pe URL yako.